I-mineral fire clay crucible - XTL
I-mineral fire clay crucible
Usendaweni efanele ye- I-mineral fire clay crucible.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
I-Liling xing tai long special ceramic co.,ltd isungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nobuzinzile nabathengisi abaningi nama-ejenti..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu I-mineral fire clay crucible.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
I-mineral lab consumables fire clay crucible
30g 40g 45g 50g 65g Izikhonkwane Zobumba ZomliloYiba nokumelana okuphezulu kunokujwayelekile kokuqhekeka ngaphansi kwezimo zokuhlola umlilo. Imikhiqizo yethu ye-crucible ne-refractory isetshenziswa kumalabhorethri kuyo yonke imakethe yamazwe ngamazwe. Sinezinhlobonhlobo zomumo nosayizi abatholakalayo ukubhekelela imininingwane edingekayo.